Ny orinasanay dia orinasam-teknolojia avo lenta manokana amin'ny R&D, famokarana, fivarotana ary serivisy azo ampiasaina amin'ny fanontana.
Amin'ny maha mpanamboatra voamarina ISO9001 sy ISO14001 anay, ny fitoniana amin'ny ranomainty no tsara indrindra any Shina, eken'ny mpanjifa sy ny mpifaninana aminy any Sina.
Mba hiantohana ny kalitao sy ny serivisy, dia nifantoka tamin'ny fizotry ny famokarana izahay. Nahazo dera avo avy amin'ny mpiara-miasa izahay.
Manana ny ozininay manokana izahay ary manana ozinina marim-pototra sy iaraha-miasa marobe ao an-tsaha. Manaraka ny "kalitao aloha, mpanjifa aloha.
Pretreatment Sublimation Liquid famindrana hafanana C ...
30ml tavoahangy vita amin'ny tavoahangy malefaka manoratra loharano pen ...
TIJ2.5 Bulk Ink Systems CISS Tank miaraka amin'ny 1/2/4/6 ...
Sokajy lehibe enina
Fujian AoBoZi Technology Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2005 tany Fujian, Sina, ny orinasanay dia orinasa teknolojia avo lenta manokana momba ny R&D, ny famokarana, ny fivarotana ary ny serivisy azo ampiasaina amin'ny fanontana. Izahay no mpanamboatra lohalaharana sy mpitarika manam-pahaizana amin'ny sehatry ny Epson, Canon, HP, Roland, Mimaki, Mutoh, Ricoh, Brother, ary marika malaza hafa manam-pahaizana manokana momba ny.
Ny vokatra rehetra amidinay dia voamarina
Napetraka ny volan'ny varotra
Azafady mifandraisa aminay izao
Serivisy miompana amin'ny mpanjifa
Fujian AoBoZi Technology Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2007. Ny orinasanay dia orinasa teknolojia avo lenta manokana momba ny R&D, famokarana, fivarotana ary serivisy fanararaotana fanontana mifanaraka aminy.
Ny ekipanay dia manolo-tena amin'ny fanavaozana, ary ny fahazavana sy ny fusion miaraka amin'ny fampiharana tsy tapaka ary ny fahendrena sy ny filozofia miavaka, manome ny filan'ny tsena vokatra avo lenta izahay, mba hanao vokatra matihanina.
Nandritra ny taona maro, nifikitra tamin'ny foto-kevitry ny mpanjifa mifototra amin'ny kalitao izahay, mikatsaka ny hatsarany, fizarana tombony ho azy roa.